Flim2MM: August 2017
Pierce Brosnan ပထမဆုံးဂျိမ်းစ်ဘွန်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးကားဖြစ်ခဲ့သလို အက်ရှင်ပရိသတ်တွေ အသဲစွဲခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းသတ်ခဲ့တဲ့သူ ၄၇ယောက်ဖြစ်ပြီး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရဲ့ လူသတ်အများဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ပထမဆုံး DVD အချပ်နဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ အကာသက နျူးကလီးယားလက်နက်ကို အပိုင်စီးဖို့ကြံစည်နေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်ကိုတားဆီးဖို့ ရုရှားသုသေသနအဆောက်အဦးကြီးကို အန္တရာယ်ကြားက ဖြိုချရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြည်တင်ပေးထားလို့ ဒေါင်းပြီး သိမ်းထားသင့်တယ်ဇာတ်ကားမျိုးပါပဲ...
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 10mins
Posted by Y Junction at 10:26:00 AM2comments:
ဘယ်သူကနေ ဒီလိုတွေ စီမံနေတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမယ့် အခြေအနေအတွေကတော့ ဖြင့် ကမောက်ကမ ဖြစ်လို့နေ ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်တွေကို ညွှန်ကြားသူနဲ့ လုပ်ကြံခံရမယ့်သူဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ....................
[FORMAT]:………………………….:) 640p SD
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Mystery, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 648 MB
Posted by Y Junction at 9:09:00 AM 1 comment:
ထိုင်းနိုင်ငံ မာဖီးယားလောကမှာ လူတယောက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ သူက အသတ်အပုတ်ကောင်းပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မညှာတာတတ်ပါဘူး။ သူဒီလိုဖြစ်နေတာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး.. သူလိုချင်တဲ့အရာ တခုရှိနေလို့ပါ... ဘာလဲဆိုတာကိုတော့..
အက်ရှင်နဲ့ ဟာသရောစပ်ထားတဲ့ ထိုင်းဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Con Pike ဖြစ်ပါတယ်။
[FORMAT]:………………………….:) 720p HD
[FILE SIZE]:…………………….….:) 800MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 19 mins
Posted by Y Junction at 9:23:00 AM2comments:
Labels: Action, Asia, Comedy
Leon ကသွေးအေးတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမား တစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့ မှာ မူးယစ်ဆေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိသားစုတစ်ခုလုံး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အိမ်နီးချင်း ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေး Mathilda ကို အမှတ်မထင် ကယ်တင်ပေးဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ လက်တုံ့ ပြန်ချင်တဲ့ Mathilda လေးက Leon ဆီက လူသတ်ပညာကို သင်ယူပါတော့တယ် ။ လူငယ်ပီပီ ပွင့်လင်းပြီး တဇွတ်ထိုးနိုင်တဲ့ Mathilda လေးကြောင့် Leon ရဲ့အေးစက်နေတဲ့ နှလုံးသားက နွေးထွေးတဲ့ချစ်ခြင်းကိုခံစားမိလာချိန်မှာတော့ ...... ခပ်ကြမ်းကြမ်း အက်ရှင်တွေသာမက သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားက စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားနဲ ရဿမျိုးစုံကို ပေးနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - ဝေလင်းကျော်
Ps. ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်သူကတော့ flim2mm က ပင်တိုင် encoder ကြီး Ko Nyi Htut ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေမအားမလပ်ရှုပ်နေပေမယ့် တားမရဆီးမရ ကြီးမားလှတဲ့ ဝါသနာကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတလက်ကို အားပေးကြပါဦးလို့....
ဒီဇာတ်ကားကို မြန်မာတွေပြန်ရိုက်ထားတာ နည်းနည်းတော့ကြည့်ဖူးတယ်။ ကလူမင်းနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ တွက်ဖက်ရိုက်းကူးထားတာ၊ နာမည်က ကြေးစားလို့ထင်တာပဲ.. ပိတ်သတ်တွေကြည့်ချင်ရင် ရှာပြီးတင်ပေးမယ်နော်... :P
[FILE SIZE]:…………………….….:) 858 MB
[Translated By]:……………………..:) Nyi Htut
Posted by Y Junction at 8:15:00 AM 1 comment:
ကဲကဲ အိန္ဒိယဇာတ်ကြမ်း အပစ်အခတ်ကားလေး တင်လိုက်ပါဦးမယ်။ တနည်းပြောရရင် အိန္ဒိယဂျက်မ ဇာတ်ကားတကားပါ။ အယ်ကာဆိုတာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်စွာစွာ အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ၊ အတိုက်အခံတွေဟာ သူမနာမည်ကိုကြားတာနဲ့တင် ပျာပျာသလဲဖြစ်ရတဲ့သူပါ။ အဲ့ဒီလို အမျိုးသမီးရဲ့ ချစ်ရသူကတော့ ဘောလီးဝုဒ်မင်းသား တလက်ဖြစ်နေပြီး၊ သူမနဲ့ သူမရဲ့ ရန်သူတွေကြားမှာ ကြားညပ်နေရသူပါ။
ဒီနောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော်တို့ FLIM2MM ဟာ အခြေနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ဇာတ်လမ်းတွေကို အကြည်လင်ဆုံးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး တဖိုင်ပဲတင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
G-Drvie HD Large
Posted by Y Junction at 6:50:00 AM No comments:
Labels: Action, Bollywood, Comedy, Crime
အတတ်ပညာတစ်ခုကို တစ်ဘက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်သွားသူကို ဝိဇ္ဇာလို့ ခေါ်တယ် ။
ဘာသာရေးအရ သာမန်လူတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ ဂမ္ဘီရအတတ်ပညာတစ်ချို့ကို တစ်ဘက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်ပြီး အရှင်ထွက် အသေထွက်နဲ့ နောင်ပွင့်မယ့်ဘုရားဖူးဖို့ လွတ်မြောက်ရာလမ်းလို့ ခေါ်တဲ့ ထွက်ရပ်လမ်းကို ရောက်သွားတာတွေရှိတယ် ။ သူတို့ကို ထွက်ရပ်ပါက် ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ခေါ်တယ် ။
ထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဝိဇ္ဇာလို့လည်း ခေါ်ကြသေးတယ် ။ ဝိဇ္ဇာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ရှိတဲ့အထဲ ကျွန်တော်တို့သိတာ ပြဒါးဝိဇ္ဇာ ၊ သံဝိဇ္ဇာ ၊ အင်းဝိဇ္ဇာ ၊ ဆေးဝိဇ္ဇာ စသဖြင့် နည်းနည်းပါးပါးပဲ သိကြတာပဲ ရှိသေးတယ် ။
ထားတော့ .... ဝိဇ္ဇာအကြောင်းဆက်ရှင်းနေရင် ကိုယ်တိုင်တောင် အဂ္ဂိရတ် ထထိုးနေရမယ် ။
ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ နဝမမြောက် တံခါးကနေ ထွက်ရပ်လိုင်းကို လျှောက်လမ်းမယ့် စာအုပ်ဝိဇ္ဇာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂမ္ဘီရအတတ်ပညာတစ်ချို့ကို စိတ်ဝင်စားရင် ကြည့်ကြပေါ့ဗျာ .......
ps. အထူးပြောစရာမလိုတာကတော့ Pirates of the Caribbean မင်းသား Johnny Depp ခေါင်းဆောင်သရုပ်ဆောင် ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ......
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 13 mins
Posted by Y Junction at 11:12:00 AM No comments:
သူတို့ဘိုးဘွားတွေပိုင်တဲ့ မြေဆိုပြီး ကျူးကျော်ဝင်ရောက် နေထိုင်တယ် ။ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေဟာ သူတို့မြေကို ဖယ်ပေးလိုက်ရပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ လူမသိ သူမသိပဲ ၂၄ နှစ်တိတိ နေလိုက်ရတယ် ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အစ္စရေးတွေကြောင့် ပါလက်စတိုင်းတွေ သွေးမြေကျတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး ။ သူတို့ရင်ထဲမှာတော့ တစ်နေ့တော့ ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံတော်ကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမယ့် အိပ်မက်တွေ ဆုပ်ကိုင်ထားတယ် ။
ပါလက်စတိုင်းတွေဟာ တစ်နေ့တော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၁၉၇၂ အိုလံပစ်ပွဲမှာ အစ္စရေး အားကစားသမားတွေကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး သတ်ပစ်လိုက်ကြတယ် ။ လူတွေဟာ ပါလက်စတိုင်း ဒုက္ခသည်တွေကို ဂရုစိုက်မိအောင်ပေါ့ ။
ဂျူးမျိုးချစ်လူငယ် လူလေးယောက်ကို စေလွှတ်ခဲ့တယ် ။ မြူးနစ်အိုလံပစ်အကြမ်းဖက်မှုရဲ့နောက်ကွယ်က လူ ၁၁ ယောက်ကို တိတ်တဆိတ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ပေါ့ ။
ဘယ်သူတွေဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တကယ် သနားဖို့ကောင်းလဲ ဆိုတာ ဒီရုပ်ရှင်ကပြသသွားတယ် ။
ပါလက်စတိုင်းတွေဟာ တကယ်ပဲ အကြမ်းဖက် ခဲ့သလား ? ဂျူးတွေဟာ သူတို့နိုင်ငံ ပြန်ပေးရမှာကြောက်လို့ ပါလက်စတိုင်းတွေကို လူတွေ မုန်းပြီး အထင်လွဲအောင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ တမင်တကာ ပြုလုပ်ခဲ့သလား? ဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ ။
အထူးသဖြင့် မူဆလင်နိုင်ငံတွေရဲ့ အလယ်မှာ တစ်ကိုယ်တည်း ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာ လှည့်ကွက်တွေ မျက်ရည်ခြူကွက်တွေ မပါပဲနဲ့တော့ ဘယ်နိုင်ငံကမှ အစ္စရေးနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ ထောက်ခံခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ ။
ဂျူးတွေကပဲ လုပ်ဇာတ်နဲ့ မျက်ရည် ခြူမလား?
ပါလက်စတိုင်းတွေကပဲ တကယ်ဆိုးသလား ?
ဆိုတာတော့ .... ဇာတ်ကားနဲ့မဆိုင်ပါဘူး ဒါ ကျနော့ အတွေး သက်သက်ပါ ။
[GENRE]:……………………….… .:) Crime, Drama, History
[FILE SIZE]:…………………….….:) 994 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 44 mins
Posted by Y Junction at 9:36:00 AM 1 comment:
Labels: Crime, Drama, History, Hollywood
Top Gun ဇာတ်ကားအောင်မြင်ချက်က U.S Navy ရဲ့တပ်သားသစ်စုဆောင်းရေးဌာနက သူတို့ရဲ့သင်တန်းအသစ် ခေါ်တဲ့ ပိုစတာတွေကို ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေမှာ သွားထောင်ထားတဲ့အထိပါပဲ။
အဲလိုလုပ်ခဲ့လို့ တပ်ထဲကိုဝင်တဲ့ အရေအတွက် ၅၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလမှာ တပ်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်း အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
အရပ် ၅' ၇" ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသား Tom Cruise အနေနဲ့ အရပ် ၅' ၁၀" ဖြစ်အောင် ဖိနပ်မှာ ၃" အမြင့်ထည့်ပြီး စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။ ပိုင့်လော့ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ အညီပေါ့။ သူ့ရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကို အတွက် Tom Cruise ဟာ F-14 Tomcat အမျိုးအစားလေယာဉ်ကို သုံးကြိမ်လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့ပြီး ပထမဆုံးစီးတဲ့အခေါက်မှာ မူးဝေပြီး အန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမတိုင်ခင်ထိ သူဟာ ဆိုင်ကယ်မမောင်းဖူးပါဘူး။ စီးတဲ့ဆိုင်ကယ်ကလည်း Kawasaki Ninja 900/GPz900R အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ကမ္ဘာမှာ အမြန်ဆုံးဆိုင်ကယ်ပါပဲတဲ့။
ရိုက်ကူးရေးကာလမှာ လေယာဉ်စတန့်သမား Art Scholl ဟာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲ ပျက်ကျပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အလောင်းရော လေယာဉ်ပျက်ပါ ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားဟာ သူ့ကိုအမှတ်ရစေဖို့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် Oscar ၁ ဆုနဲ့ အခြား ဆု ၁၀ ဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
Take My Breath Away သီချင်းက Oscar ဆုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက Top Gun သင်တန်းသား ဘဝကတည်းက ထူးချွန်တဲ့ Maverick ဟာ တကယ့်စစ်မြေပြင်ဝင်ရာမှာ အတော်ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်လည်း ရုန်းကန်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့အဖေသေဆုံးခဲ့တဲ့ အမှားအယွင်းမျိုး ထပ်မကြုံရအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားသလဲ...
ခေါင်းမာတက်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် အဆင်မပြေမှုတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သလဲ...
သူသဘောကျတဲ့ သင်တန်းပို့ချသူလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်း.....
ကြည့်ပြီးသား ပြန်ကြည့်လည်း မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါကြောင်း......
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Drama, Romance
Posted by Y Junction at 8:06:00 AM 1 comment:
Labels: Action, Drama, Hollywood, Romance
ဒီဇာတ်ကားက Jackie Chan ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကော၊ သူ့ရဲ့ပရိတ်သတ်မဟုတ်သူတွေကြား အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ကလေးကြိုက်ဇာတ်ကားမျိုး ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဇာတ်ကားမှာ Jackie ကတော့ သူရဲ့တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Tuxedo ဆိုတာ အမျိုးသားဝတ် လည်ပင်းဖဲပြားပုံနဲ့ ဝတ်စုံကိုပြောတာပါ။ Penguin Suit လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အဲဒီ ဝတ်စုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တီထွင်တဲ့သူနဲ့ လိုချင်တဲ့သူကြားရောက်သွားတဲ့ အူကြောင်ကြောင် ဇာတ်ရုပ်နဲ့ Jackie နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
တစ်ကားလုံးကို ထုံးစံအတိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Jackie ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မိသားစုအတူကြည့်လို့ရတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါကြောင်း....
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Comedy, Sci-Fi
Labels: Action, Comedy, Hollywood, Sci-Fi
Posted by Y Junction at 11:11:00 AM No comments:
ဂျွန်ကွန်စတန်တင်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို မောင်းထုတ်ပေးသူ အထက်လမ်းဆရာ တစ်ဦး ။
မကောင်းဆိုးဝါးတွေကြားထဲမှာပဲ သူ့ဘ၀ကိုရှင်သန်ပြီး သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်တွေကြောင့်သူသေရင် ငရဲကိုသာ သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ် ။ သူဟာ ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်တာကြောင့် အဆုတ်တခုလုံးစုတ်ပြတ်သတ်နေပြီး သေဖို့အချိန်ကလည်းနီးကပ်နေပါပြီ ။
ကွန်စတန်တင်းဟာ သူသေရင် ငရဲအစားကောင်းကင်ဘုံကို တက်ရဖို့အတွက် စွန့်စားမှုတခုကို အမြဲတမ်းလိုက်ရှာပြီး လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ဝိဥာဉ်ဟာငရဲနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလည်း ယူဆတဲ့အတွက် သူ့ကိုအမျိုးမျိုးသတ်ဖို့ကြိုးစားပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးနေကြပါတယ် ။
တစ်နေ့မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေသွားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ညီမဖြစ်သူကို မကောင်းဆိုးဝါး နတ်ဆိုးတွေလိုက်လံနှောက်ယှက်တဲ့အခါမှာ ဂျွန်ဟာ အဲဒိအမျိုးသမီးဘက်ကနေ ကူပါတော့တယ် ။
ကောင်းကင်တမန်နဲ့ နတ်ဆိုးတွေအပြင် နတ်ဆိုးဘုရင်လူစီဖာ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုတွေနဲ့အတူ ဂျွန် ကွန်စတန်တင်းရဲ့ စွန့်စားမှုတွေ.....
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Fantasy, Horror
[FILE SIZE]:…………………….….:) 800 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 1 mins
Labels: Drama, Fantasy, Hollywood, Horror
အမေကို လုပ်ကျွေးတစ်နေတဲ့ တက္ကဆီသမားတစ်ယောက်ရှိတယ် ။ သူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားကောင်းမှုကြောင့် ရှေ့နေမတစ်ယောက်နဲ့ ကြိုက်မလိုအထိ ဖြစ်နေခဲ့တယ် ။
တစ်ညမှာ တက္ကဆီသမားဟာ လေဆိပ်ကဆင်းလာလာတဲ့
ခရီးသည် တစ်ဦးကို ခေါ်တင်မိတယ် ။ သူခေါ်တင်လာတဲ့ ခရီးသည်က ကြေးစားလူသတ်သမားဖြစ်နေပြီး သူ့ကားကို ငှားပြီး လူခြောက်ဦးကို နေရာအနှံ့လိုက်သတ်တယ် ။ သူသတ်ရမယ့်လူတွေက အမှုကြီးတစ်ခုက အဓိက သက်သေတွေပဲဖြစ်တယ် ။ ကြေးစားလူသတ်သမားက လူဘယ်နှစ်ဦးကို သတ်နိုင်မလဲ တက္ကဆီသမားကရော ဘယ်လို အလိုတူ အလိုပါ ကြံရာပါဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ ကြည့်ရှု့လိုက်ကြပါ ။
[GENRE]:……………………….… .:) Crime, Drama,Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 849 MB
Posted by Y Junction at 1:43:00 AM No comments:
ဘောလီးဝုဒ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကားကောင်းတလက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဇာတ်လမ်းက Drama အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီး Naseeruddin Shah ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဘဏ်မန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်တဲ့ John Day ဟာ ဇနီးဖြစ်သူ Maria Day နဲ့ အတူတကွနေထိုင်ပါတယ်။ သူတို့မှာ သမီးလေးတယောက်ရှိခဲ့ပြီး ရုတ်တရတ်ပျောက်ဆုံးသွားကာ ပြန်ရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး Maira ဟာ စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရပြီး ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောတော့ပါဘူး။
တရက်မှာတော့ John Day ဟာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ နယ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန် အိမ်မှာတယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ Maria အတွက် ဒုက္ခရောက်စရာကိစ္စတခုကြုံရပါတော့တယ်... အဲ့ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းစတာပါပဲ....
ဘာတွေဒုက္ခဖြစ်လဲ... ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ ဆိုတာတွေကိုတော့....
[GENRE]:……………………….… .:) Mistery, Thriller
[Translate By]:……………………..:) iflix
Posted by Y Junction at 1:06:00 AM No comments:
ဒုတိယထွက်ခဲ့တဲ့ Terminator 2: Judgement Day ပြီးနောက် တတိယကား Terminator 3: Rise of The Machines ထွက်လာဖို့အတွက် အချိန် ၁၂ နှစ်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ အဓိက သရုပ်ဆောင်ကြီး ဖြစ်တဲ့ မင်းသား အာနိုးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်က ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်နဲ့ အချိုးအစားမျိုးအတိအကျ ရအောင် အချိန် ၆ လပေးပြီး တစ်နေ့ ၃ နာရီ လေ့ကျင့်ယူခဲ့ရပါတယ်။
သူ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စိုးရိမ်နေတာက စစချင်း အဝတ်ဗလာနဲ့ အခန်းမှာ အရင်ဇာတ်ကားတွေထဲက ခန္ဓာကိုယ်မျိုးမဟုတ်မှာကို ပရိတ်သတ် သတိထားမိပြီး ဝေဖန်မှာကို ကြောက်တဲ့ အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ John Connor ဆိုတဲ့ကောင်လေးက အရွယ်ရောက်နေတဲ့သူဖြစ်နေပါပြီ။ သူ့ကို လုပ်ကြံမဲ့ အစီအစဉ်ကို Skynet အဖွဲ့အစည်းက လက်မလျော့ သေးတဲ့အတွက် အရင်ပို့ခဲ့တဲ့ T-1000 စက်ရုပ်ထက် ပိုပြီး ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ T-X ကို လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ကာကွယ်ပေးမဲ့ CSM-101 အမျိုးအစား စက်ရုပ်ကို စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးနဲ့ မြို့ပြ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး လုပ်ကြံတဲ့ အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါတော့တယ်။ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကိုပါ ထိန်းချုပ်မိတဲ့အခါမှာတော့ နျူးကလီယား စစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။
ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်လိုက်ကြပါတော့ဗျာ.....
[Translate By]:……………………..:) Con Pike
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမပြောခင် ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
ဒီ Terminator2ဇာတ်ကားဟာ ပထမကား(Terminator 1) ထွက်ပြီးနောက် ထပ်ရိုက်တဲ့ ဒုတိယကားတွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ (Mad Max :Fury Road 2015 မထွက်ခင်အထိပေါ့။)
နောက်ပြီး Terminator ဇာတ်ကားတွေထဲမှာလည်း အအောင်မြင်ဆုံးဆိုတာကို Oscar ဆု ၄ ဆုရရှိထားတာက သက်သေပြနေပါတယ်။
ဒီကားမှာ မင်းသားကြီးအာနိုးရဲ့ အနုပညာကြေးက ၁၅ မီလီယံဒေါ်လာရှိပါတယ်။ တစ်ကားလုံးမှာ သူပြောရတဲ့စကားက အလုံးရေ ၇၀၀ ပဲရှိပါတဲ့အတွက်ကြောင့် စကားလုံးတစ်လုံးကို ၂၁,၄၂၉ ဒေါ်လာတန်ပါတယ်။
Terminator2ဇာတ်ကားက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်(Terminator 1) က လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရာမှာ လွှတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ Sarah Connor မှာ John Connor ဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက် ရှိနေပါပြီ။
အဲဒီ John ဆိုတာ သူတို့ စက်ရုပ်တို့ကြီးစိုးတဲ့ ကမ္ဘာကို တွန်းလှန်မယ့်သူဖြစ်နေတာကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ကြံဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။
ဒါကို တားဆီးကာကွယ်မဲ့ အနာဂတ်ကမ္ဘာက စက်ရုပ်လူသားကလည်း ရှိနေပါတယ်။ လက်ဦးမှု ဘယ်သူရမလဲဆိုတာကတော့ ကြည့်ရှုခံစားကြပေးပါဦး။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 818 MB
Rating 8.1/10·IMDb မို့
ကောင်းတယ် ပြောနိုင်ပေမဲ့ အစပိုင်းတော့ ပျင်းစရာ ကောင်းမှာပါပဲ။
စုံထောက် လီယိုနာဒို နဲ့ သူ့ လက်ထောက် က လူသတ်မှု ကိစ္စ စုံစမ်းရင်းနဲ့ ကျွန်းတစ်ခုမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အရူးဆေးရုံ/ထောင် ကို ရောက်လာရာက စပါတယ်။
တစ်ကားလုံးကို လီယိုနာဒို ရဲ့
နေရာကနေ အများဆုံး ရိုက်ပြသွားတာမို့၊ ဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက် အမှု စုံစမ်းပုံ၊ သဲလွန်စ ရပုံ တွေမှ တဆင့် နောက် ဆုံး ဇာတ်လမ်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကြီး ပေါ်လာတာပါပဲ။
ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် မွန်းကြပ်လာပြီး
ဘေးနားက လူတွေကို မယုံသင်္ကာဖြစ်လာတဲ့ အထိပါ။ လီယိုနာဒို အမူအရာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
[Fixed By]:……………………..:) Aries Win
Posted by Y Junction at 8:59:00 AM No comments:
Labels: Hollywood, Mystery, Thriller
ခြေကန်ကစ်တွေကို မှ သဘောကျတဲ့ သိုင်းလောကသားတွေ အတွက် တိုက်ကွမ်ဒိုကားကောင်းလေးနဲ့ တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ကိုရီးယားနဲ့ ထိုင်း တွဲရိုက်ထားတာဖြစ်ပြီး ONE BAK ထိုင်းကားရဲ့ ဒါရိုက်တာ Prachya Pinkaew ဖြစ်ပါတယ်။ သိုင်းချခန်းတွေ အပြင် ဟာသ ပါ ရောနှောထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယား တိုက်ကွမ်ဒို သင်တန်းကျောင်းမိသားစုမှာ သားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ Olympic မှာ တိုက်ကွမ်ဒို ရွှေတံဆိပ်ရဖို့အထိ မျှော်မှန်းထားပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ Hip Hop အဆိုတော် ဖြစ်ဖို့ ဝါသနာပါသူပါ။ တိုက်ကွမ်ဒို သင်တန်းကျောင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖွင့်ထားပြီး အဲဒီမှာ သူဌေးသား လူဆိုးတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုမှာ ပတ်သတ်မိပြီး နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ လက်စားချေမှုတွေကို အခြေခံပြီး သုံးတဲ့တိုက်ကွက်တွေကလည်း အရမ်းကို အဆင့်မြင့်ပါတယ် လို့ အာရှ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်းရေး Blog တစ်ခုက ချီးကျူးပြောဆိုထားပါတယ်။
သိုင်းလောကသားတွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း ဖြစ်ပါကြောင်း...
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Sport
[Translate By]:……………………..:) လယ်ဝေးသားလေး ကျော်မျိုးသူ
Posted by Y Junction at 7:49:00 AM No comments:
Labels: Action, Asia, Korea, Sport
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Time Travel အကြောင်းသိပ်ပြီး မပြောဆိုကြတော့ပေမယ့် Time Travel အယူအဆနဲ့ အကြောင်းအရာကို စာအုပ်ရေးသား အောင်မြင်တဲ့ အချိန်ကာလကတော့ ၁၇၇၁ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်စာရေးဆရာ Louis-Sébastien Mercier က ရေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီထက်စောပြီး Time Traveller (ရောက်ချင်တဲ့ အချိန်ကို သွားနိုင်တဲ့သူ) အကြောင်းအရာများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အချို့က အတိတ်ကို သွားလည်ရုံသာ ရပေမယ့် အချို့ကတော့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြန်လည် ပြုပြင်နိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးကိုတောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်ရင် ကြိုးစားလုပ်ယူလို့ ရကြောင်းတောင် ဆိုပါတယ်။
ရူပဗေဒ ပညာအရလည်း အချိန်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအခြား ခရီးသွားလို့ရအောင် သံလိုက်စက်ဝိုင်းများ ဖန်တီးနိုင်ကြောင်း ဆိုပြီး ယနေ့တိုင် ကြိုးစားတီထွင်နေသူများလည်း ရှိပါတယ်။
နည်းပညာနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်မျိုးပါ။
အခု Terminator ဇာတ်ကားမှာ အချိန်ခရီးသွားခြင်း နည်းပညာနဲ့ စက်ရုပ်တို့ကမ္ဘာဖြစ်နေတဲ့ ၂၀၂၉ ကနေ ၁၉၈၄ ကို ပြန်သွားပြီး စက်ရုပ်တွေရဲ့အုပ်စိုးမှုကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့သူ မမွေးဖွားလာအောင် တားဆီးတဲ့ အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ပြီး ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ မင်းသားကြီး အာနိုးရဲ့ ပိုစတာတွေ ဝယ်ပြီး အိမ်နံရံမှာကပ်ခဲ့တဲ့အထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ James Cameron ရဲ့လက်ရာဖြစ်တာကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပြန်ကြည့်ရင်သိပ်မထူးဆန်းပေမယ့် တကယ့်ကို ဆန်းသစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ နည်းပညာအယူအဆ ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။
Poseidon ဆိုတဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောဟာ အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ် ။ သင်္ဘောပေါ်မှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကျင်းပနေချိန်မှာ ပင်လယ်ပြင်မှာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ဒီရေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ လှိုင်းလုံးကြီးကြောင့် သင်္ဘောဟာ တိမ်းမှောက်ခဲ့ရပါတယ် ။
အားလုံးနီးပါးသေဆုံးပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ ခြောက်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ဟာ သူတို့အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြိုးစားကြပါတယ် ။
သူတို့တွေ နောက်ဆုံးမှာ အသက်ဆက်ရှင်ကြမလား ၊
ကယ်ဆယ်မယ့်သူတွေနဲ့ရော တွေ့ရပါ့မလား ...
ဒီရုပ်ရှင်မှာ လူသားဆန်မှု တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေကို တွေ့ရပြီး အသက်နဲ့ မေတ္တာတရား တကယ်တမ်း ယှဉ်ပြိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့ .........
[GENRE]:……………………….… .:) Action,Adventure,Drama
[FILE SIZE]:…………………….….:) 600 MB
Posted by Y Junction at 6:27:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 5:34:00 AM 1 comment: